Mogadishu Journal » Wasiirrka gaashaandhiga iyo wafdi uu hogaaminayo oo u safray dalka Jabuuti
Mjournal : –Wasiirrka gaashaandhiga xukuumada Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhaw ka dhoofay garoonka diyaaradaha magaaalada Muqdisho iyaga o ku sii jeeda dalka Jabuuti.
Wasiirrka ayaa ka hor inta uusan ka dhoofin garoonka waxaa uu faah faahin ka siiyay warbaahinta ujeedada safarka uu ugu socdaalayo dalka Jabuuti, isaga oo sheegay in safarkiisu la xiriiro kulamo uu la qaaday doono madaxda dalkaas, isaga oo intaa ku darray in mas’uuliyiinta dalka Jabuuti kala hadli doono xiriirkla labada dal iyo sidii dowladda Jabuuti ay usii wadi lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya.
”Dowladda Jabuuti waa dal aynu walaalo nahay dano badanna naga dhaxeeyaan, sidaa daraadeed waxaa halkaa u tagayaa xoojinta cilaaqaadka labada dal iyo waliba sidii aynu uga wada hadlli laheyn arrimo badan oo uu ammniga ka mid yahay,” ayuu yiri wasiirrka gashaandhiga.
Waxaa uu intaa ku darray wasiirrka in madaxda dalkaas uu uga mahad celin doono taageerada hagar la’aanta ah oo ay mar walba la bar bar taagan yihiin bulshada Soomaaliyeed, siyaasad ahaan iyo militari ahaan intaba.
Dowladda Jabuuti waxaa ay qeyb ka tahay howlgalka midowgga Africa AMISOM waxaana Soomaaliya ka jooga in ka badan 1000 askari oo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ugu danbeytii wasiirka gaashaandhiga waxaa uu sheegay in ay dalka Jabuuti uga sii horeeyaan wafti kale oo uu hogaaminayo Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cabdi Faarax Shiirdoon Saacid oo sida uu sheegay saakay gaaray dalkaas,wuxuuna tilmaamay in ay muddo dhowr cisho ah booqasho ku joogayaan wadanka Jabuuti.
Hay’ad caalami ah oo beenisay eedeyntii musuq-maasuqa ee loo jeediyay dowladda Soomaaliya